ငွေကြေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ငွေကြေး
Posted by နိုင်နိုင် on Nov 30, 2010 in Business & Economics, News | 16 comments
ကျွန်တော့် ချမ်းသာတဲ့ ငွေကြေးတွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ဒီအကြွေစေ့လေးတွေ သိမ်းထားခဲ့တာကြာပါပြီ တန်ဘိုးရှိလို့လဲ သိမ်းထားခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က မေမေ မုန့်ဖိုး ပေးရင် ဒီအကြွေစေ့လေးတွေပေါ့ ခုတော့ အနည်ဆုံး 200 ကျပ် ပေးမှ ကလေးတွေက ကျေနပ်တယ်လေ ဒါတောင် အသုံးမခံဘူးမလား ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုနောက်ပိုင်းဆိုသိကြတဲ့အတိုင်း 100 ကျပ်တန် 200 ကျပ်တန်တွေဆို ကိုင်လို့မရတော့တဲ့အတွက် အိတ်လေးတွေထဲထဲ့ပြီးသုံးနေရပြီမလား အခုကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့ အကြွေစေ့နဲ့ အတန်လေးတွေဆို အသုံးလဲ မ၀င် ကွယ်ပျေက်တော့မှာမို့ ကျွန်တော် ထိမ်းသိမ်းထားတာပါ နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေလဲ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု့လေ့လာလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ယခုခေတ်ငွေကြေးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလဲ ဖြစ်တယ်လေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အရည်အသွေးကိုယ်ကြည့်ရုံနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ်…..
cherryland lay has written 46 post in this Website..
View all posts by နိုင်နိုင် →
ပြားစေ့လေးတွေ့တော့ အံ့သြမိပါတယ်..။ ပြားစေ၊ ငါးပြားစေ၊ ၁၀ပြားစေ့တွေက အလေးစေ့ဆိုပြီး .. ဒန်နဲ့မဟုတ်ပဲ .. တခြားသတ္တူတမျိုးနဲ့လုပ်တာရှိသေးတယ်ဗျ..။ ဘာကြောင့်လဲတေ့ာမသိ..။
အကြွေတွေ ငယ်ငယ်တည်းက ဆူး သိမ်းထားတာ ဘူး တဘူး ရှိတယ်။ အကြွေတွေ လိုက်စုတာနဲ့… ရောက်ရာ နိုင်ငံက အကြွေ စေ့ နဲနဲ ချန်ထားပြီး သိမ်းထားတယ်။ အကြွေစုရတာ ၀ါသနာ ပါလို့.. ပိုက်ဆံ ကတော့ မသိမ်းထားဘူး။
သူငယ်တန်းတုန်းက မုန့်ဖိုး တစ်နေ့ ဆယ်ပြားပဲ ရတာ မှတ်မိသေးတယ် … အကြွေစေ့နဲ့ ရေခဲချောင်းပုံးထဲကို ပစ်ထည်ပြီး ရေခဲချောင်းပိုစားရအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေက အခုတော့ ပုံပြင်ဖြစ်ပြီ …
သူငယ်တန်းတုန်းက ၁ကျပ်နဲ့ မုန့် သေးသေးလေး တခု ရတယ်။
ရခိုင်မုန့်တီ တပွဲ ၃ကျပ်
အထက်ဖော်ပြပါပိုက်ဆံများကို တိုးတက်လာသော အဆအတိုင်းပေးဝယ်မည်ဆိုပါကရောင်းပါမည်။
1966 ခုနှစ်ထုတ် ဆယ်ပြားလေးဒေါင့်ဆိုရင် အခုခေတ်ပိုက်ဆံနဲ့တွက်ရင် ဘယ်လောက်တန်မလဲ။
အဲဒီခေတ်က လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် တစ်မတ်။
လေးထောင့် ဆယ်ပြား အိမ်မှာ ဆူး စုထားတာ ရှိတယ်.. အကြွေမှ စုံနေအောင်ကို ရှိတယ်..
ဆူးက သူဌေးမှန်းသိအောင် လာကြွးနေပြန်ပြီ ….
အဲဒီခေတ်က လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် တစ်မတ်။)
အင်းခုခေတ်တိုးတက်လာတဲ့အဆနဲ့ဆိုရင်ငွေ80/-နဲ့100/-ကြား ပေါ့ဗျာ ဒါပေမဲ့သူရဲ့သက်တမ်းကို ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒိလောက်မက တန်ကြေးရှိရင် ရှိမှာပေါ့ ရှိရင်သိမ်းထားပါ နောက်ကျတော့ တန်ကြေးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်း တွေဖြစ်လာမှာပါ ဟိုးအရင်က ပဲစေ့တွေ မတွေ့ရတော့ဘူး ။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်သား အန်လကယ်ကြီး ပြောမှ.. ဆူး သိမ်းထားတဲ့ အကြွေတွေ ထဲမှာ.. အင်္ဂလန် ဘုရင်မကြီး ပုံနဲ့ အစေ့တွေတောင် ပါတယ်။ ဘယ်လောက် တန်လဲ ဆိုတော့ သွားပြန်ရှာရမယ်.. လုံခြုံတဲ့ နေရာမှာ သိမ်းထားလို့.. ဟီးဟီး.. သတင်းကြည့်ပြီးတော့ ဆူး ကြောက်ပါတယ်။
ဆူး အကြွေစေ့လေးတွေ သေချာသိမ်းထားပါ။ မရောင်းကြပါနဲ့ဗျာ နောက်ပိုင်း ရှေးဟောင်းဖြစ်လာမဲ့ အကြွေစေ့လေးတွေ။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ တန်ဘိုး ရှိတဲ့ဟာက တန်ဘိုးပိုရှိလာပါလိမ့်မယ် ရှားပါးချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခွင့်ရှိတော့ ကိုယ့်ကို ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးနိုင်ဖြစ်နေရမှာပါ။ ဈေးကောင်းရရင်တော့ပြောဦးနော်…:D
မြေးတွေ မြစ်တွေကို အမွေပေးဖို့ သိမ်းထားတာ.. အဖိုးမတန်ပေမဲ့.. သူတို့ အတွက် အဖိုးတန်တဲ့ အမွေ ဖြစ်မလားလို့.. သိမ်းထားတာ.. ဟီးဟီး..
ပြောလို့သာ ပြောတာ.. ဆူး အဘိုးက မြေးတွေ ကို ပြဖို့ ရွှေဒင်္ဂါးတွေ သိမ်းထားတယ် ဆိုလား.. သေတော့ ရှာမရဘူး.. ဘယ်သူလက်ဦးသွားမှန်း မသိဘူး.. ငယ်လွန်းလို့ ညာတောင်းခဲ့ ရကောင်းမှန်း မသိလို့ မရလိုက်ဘူး။
ရတနာပုံခေတ်က ဒေါင်းဒင်္ဂါးဆို ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရမလဲ။ ဝယ်ရင်ကော ဘယ်လောက်ပေါက်သလဲ။ ကျနော့်ဆီမှရှိတယ်။
ရတနာပုံဒေါင်းဒင်္ဂါးကို အီးဘေးမှာ .. ၈၀လောက်နဲ့ရောင်းနေတယ်..။
FOR SALE MYANMAR BURMA SILVER COIN CROWN – 1 KYAT. DATE 1852. 1 YEAR TYPE COIN CONDITION IS XF +++. HARD TO GET THESE COINS IN SUCH CONDITION. AUTHENTICITY GUARANTEE. GREAT ADDITION TO YOUR ASIA COIN COLLECTION. NO RESERVE. SHIPPING BY REGISTERED MAIL ONLY $16.95
ရတနာပုံခေတ်က မန္တလေးဂေဇက်သတင်းစာဆိုရင်တော့ .. ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပေးမယ်ဗျာ။
အစအဆုံး တစောင်လုံးမပြဲမရိဆိုရင် ၁၀၀၀ ပေးမယ်ဗျာ။
ဒီခေတ် မန္တလေးဂေဇက်သတင်းစာဆိုရင်တော့ ..အလကားရမယ်..။ ကြိုက်သလောက်လာယူ..။ :p
ယူအစ် ရောက်မှ လာတောင်းမယ်။ အဲဒီတော့မှ လမ်းစရိတ်ပေး